SMS ဆိုတာဘာလဲ။ Mobile Text Marketing အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
SMS ဆိုတာဘာလဲ။ MMS ဆိုတာဘာလဲ။ Short Code ဆိုတာဘာလဲ။ SMS သော့ချက်ကဘာလဲ။ အတူ မိုဘိုင်းစျေးကွက် ပိုပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်နှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောအခြေခံအသုံးအနှုန်းအချို့ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။
SMS (စာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှု)- စာတိုတိုများပါ ၀ င်သောလက်ကိုင်ဖုန်းများအကြားစာတိုများပေးပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအတွက်စံတစ်ခု - ပုံမှန်အားဖြင့်စာသားသာအကြောင်းအရာပါသော။ (စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ)
MMS (မာလ်တီမီဒီယာစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှု) လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောစာတိုပေးပို့ရန်စံပြုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပုံမှန် Shortcode (Shortcode)- လက်ကိုင်ဖုန်းမှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည့်ကိန်းဂဏန်းတိုများ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၄ မှ ၆ ဂဏန်း) ။ ကြိုးမဲ့အသုံးပြုသူများသည်မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာမြောက်မြားစွာကို ၀ င်ရောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်သာမန်စာတိုတိုများသို့စာတိုပေးပို့သည်။
keyword- ကအတွင်းအတွင်းရှိပစ်မှတ်ထားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုသောစကားလုံးသို့မဟုတ်အမည် အတိုကုဒ်ဝန်ဆောင်မှု.
ဤရွေ့ကားများတွင်အသုံးပြုအခြေခံစည်းကမ်းချက်များအချို့ကိုဖြစ်ကြသည် SMS စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။။ တောင်မှအဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူ ကုဒ်တိုများ လူအများစုက ၄ င်းတို့အားလုံးအတူတကွမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုထပ်မံရှင်းပြလိုကြသည်။
ငါအင်တာနက်နှင့်ဒိုမိန်းအမည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါ။ တစ် ဦး စဉ်းစားပါ ကုဒ်တို ဒိုမိန်းအမည်နှင့်တစ် ဦး နှင့်ဆင်တူသည် keyword စာမျက်နှာနှင့်ဆင်တူသည်။ သတင်းကိုသင်လိုချင်သောအခါသင်သွားနိုင်သည် ရာဇဝတ်မှု ၏ (Keyword) စာမျက်နှာ CNN.com (Shortcode) ။
ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတယ်၊ အီးမေးလ်ကတဆင့်သင်စာရင်းသွင်းချင်ရင် Martech Zone, စာသား စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (သော့ချက်စာလုံး) မှ 71813။ စမ်းကြည့်ပါ ဦး စာရင်းသွင်းရန်စာသား ကျွန်ုပ်တို့၏ SMS ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆပ်!
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းကိုငွေလှူဒါန်းရန် (သို့) ပိုက်ဆံပေးရန် (သို့) မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုရန်၊ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုရန်ချိတ်ဆက်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
SMS Marketing ဆိုတာဘာလဲ
တူသောပလက်ဖောင်း ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း စျေးကွက်သမားများသည်အသုံးပြုသူများအားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်အတွက်သော့ချက်စာလုံးနှင့် shortcode ကိုဖြန့်ဝေခွင့်ပြုသည် စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်အလွန်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်သောကြောင့်ပံ့ပိုးသူအများစုသည် double opt-in method လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုတောင်းသောကုဒ်၏သော့ချက်စာလုံးကိုစာသားရိုက်ပြီးနောက်၊ သင်၏ပံ့ပိုးသူပေါ် မူတည်၍ မက်ဆေ့ခ်ျများသည်အခကြေးငွေများကျခံရနိုင်သည်ဟူသောအသိပေးချက်ဖြင့်ပြန်လည်တောင်းခံရန်တောင်းခံချက်ကိုသင်ပြန်လည်ရရှိသည်။ subscription platform များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်အားစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအားအချိန်ဇယားဆွဲရန်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုသတင်းပို့ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
SMS Marketing သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှထိရောက်မှုရှိကြောင်းဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ပါ။
* ဤအဓိပ္ပာယ်သည်အရသိရသည် မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်း။ မှာရရှိနိုင်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ် ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း.
Tags: တီးဝိုင်းဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်းသော့ချက်စာလုံးတွေမိုဘိုင်းအဓိပ္ပါယ်များကုဒ်တိုများသတင်းတိုစနစ်စာတိုsms စျေးကွက်ရှာဖွေရေးsms မက်ဆေ့ခ်ျများစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျစာရင်းသွင်းရန်စာသားစာရိုက်ကုဒ်တိုတိုကဘာလဲsms သော့ချက်စာလုံးကဘာလဲMMS ဆိုတာဘာလဲsms ကဘာလဲ
24:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 52
ကြီးကျယ်တဲ့ဓာတ်ပုံ၊ အာဒံ! ငါဟူစတန်ရှိအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ရှိ၏နှင့်တင်ပြသူတစ် ဦး ကဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကလူတိုင်းကိုအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စာတိုကုဒ်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုစာပို့ခိုင်းပြီးသူတို့ထံတင်ပြချက်ကိုအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မည်။
25:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 26
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! ၎င်းသည် Connective တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
15:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 41
Connective ကလည်း API ပေါင်းစည်းမှုကိုပေးပါသလား။
15:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 50
ဟုတ်တယ်, ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း API အပြည့်အစုံရှိသည်။